Maitiro Ekuyera, Kunzvenga, uye Kuderedza Yakakwira Shopping Cart Kurega Mitengo | Martech Zone
Ini ndinogara ndichishamisika pandinosangana nemutengi neinternet Checkout maitiro uye vashoma vavo vakaedza chaizvo kutenga kubva kune yavo saiti! Mumwe wevatengi vedu vatsva anga ane saiti yavakaisa toni yemari mairi uye matanho mashanu ekubva papeji rekutanga kuenda kungoro yekutengera. Chishamiso kuti chero munhu arikuzviita kusvika ipapo!
Chii chinonzi Shopping Cart Abandonment?
Zvinogona kunzwika semubvunzo wepuraimari, asi zvakakosha kuti iwe uzive kuti kusiiwa kwengoro yekutenga hausi muenzi wese kune yako ecommerce saiti. Yekutengera ngoro yekutengesa ndeye chete vashanyi vakawedzera chigadzirwa kuchitoro chekutengesa uyezve vasina kupedzisa kutenga mune icho chikamu.
Yekutengera ngoro yekusiya ndipo panogona kuve mutengi anotanga kutarisa maitiro e online online asi achidonha kunze kweichi chiitiko asati apedza kutenga.
Vatengi vazhinji vanozotarisa uye nekuwedzera zvigadzirwa kungoro yekutengera vasina chinangwa chekutenga. Ivo vangangoshuvira kungoona subtotal yeiyo zvigadzirwa, kana inofungidzirwa mutengo wekutakura, kana zuva rekusvitsa… pane toni yezvikonzero zvine chikonzero nei vanhu vasiya ngoro yekutengera.
Maitiro Ekuverenga Yako Yekutengera Ngoro Kusiya Kwenhare
Fomula reKutenga Ngoro Kuraswa Kwekusiya:
Maitiro Ekuyera Ngoro yekutengera Kurega mu Analytics
Kana iwe uri kushandisa Google Analytics pane yako ecommerce saiti, iwe unofanirwa setup ecommerce yekutevera pane yako saiti. Iwe unogona kuwana yako yekutengera ngoro yekusiya chiyero uye ruzivo muKushandura> Ecommerce> Shopping Maitiro:
Ziva kuti kune maviri akasiyana metric:
Ngoro Kusiya - uyu mushoperi akawedzera chigadzirwa kungoro asi asina kupedzisa kutenga.
Tarisa-kunze Kurega - iyi shopper iyo yatanga maitiro ekubuda asi ikasapedza kutenga.
Pane rimwe izwi muindasitiri futi:
Bhurawuza Kusiyiwa - iyi shopper - inowanzo kunyoreswa - iyo yakaongorora saiti yako asi haina kuwedzera chero zvigadzirwa kungoro uye yakangosiya saiti.
Ndeipi Avhareji Yekutengera Ngoro Kusiyiwa Mutengo?
Chenjera ne pakati nepakati mitengo pane chero mhando yehuwandu. Vatengi vako vanogona kusiyana mukugona kwavo kwehunyanzvi, kana kubatana kwavo, kana kukwikwidza kwako. Kunyangwe ichi chiri chikuru chekutanga, ini ndaizotarisisa zvakanyanya kune zvinoitika zveyako yekutenga ngoro yekusiya mwero.
Global Avhareji - Iyo yepasi rose avhareji chiyero chengoro kusiiwa iri 75.6%.
Mobile Avhareji - 85.65% ndiyo avhareji yekusiya mwero panhare mbozha.
Kurasikirwa Kwekutengesa - maronda anorasikirwa anosvika kumadhora gumi nemasere emadhora pagore mumari kubva kungoro dzekutengesa dzakasiiwa.
Ndeapi mavhareji Ekutengera Ngoro Kuraswa Kwemitengo neindasitiri?
Iyi data inotorwa kubva kune anopfuura mazana mashanu ecommerce masaiti uye inoteedzera kusiyiwa kwematanho munzvimbo nhanhatu dzakakosha zvikamu kubva Kutengesacle.
mari - ine 83.6% yekutengesa ngoro yekusiya mwero.
Kwete-Kubatsira - ine 83.1% yekutengesa ngoro yekusiya mwero.
famba - ine 81.7% yekutengesa ngoro yekusiya mwero.
chitoro - ine 72.8% yekutengesa ngoro yekusiya mwero.
fashoni - ine 68.3% yekutengesa ngoro yekusiya mwero.
Gaming - ine 64.2% yekutengesa ngoro yekusiya mwero.
Sei Vanhu Vachirega Ngoro dzekutenga?
Kunze kwezvikonzero zviri pamutemo, pane zvinhu zvaunogona kusimudzira mune yako yekutengera ruzivo kuti udzikise chiyero chekusiya:
Natsurudza peji rako kumhanya - 47% yevatengi vanotarisira kuti peji rewebhu riite mumasekondi maviri kana pasi.
Mari yepamusoro yekutumira - 44% yevatengi vanosiya ngoro nekuda kwemitengo yepamusoro yekutumira.
Nguva yekudzivirira - 27% yevatengi vanosiya ngoro nekuda kwekuomerwa kwenguva.
Hapana ruzivo rwekutumira - 22% yevatengi vanosiya ngoro nekuda kwekusava neruzivo rwekutakura.
Kupererwa nedura - 15% yevatengi havazopedze kutenga nekuti chinhu chiripo.
Yakashata chigadzirwa mharidzo - 3% yevatengi havazopedzise kutenga nekuda kwekuvhiringidza ruzivo rwechigadzirwa.
Kubhadhara kugadzirisa zvinhu - 2% yevatengi havapedzise kutenga nekuda kwekubhadhara zvinhu
Ini ndinokurudzira yangu yega zano, inonzi iyo 15 uye 50 bvunzo… Tora a 15 ane makore ane makore musikana uye ane makore makumi mashanu murume kutenga chimwe chinhu kubva kune yako saiti. Teerera kuti vakazviita sei pamwe nekushungurudzika kwazvaive. Iwe uchawana tani nekungovatarisa! Iwe haugone kudzivisa kusiiwa zvachose, asi unogona kuzvideredza.
Maitiro Ekudzora Ngoro yekutengera Kurega
Zvakakosha kudzikisa ngoro yekutengera kukunda mashandiro, ruzivo, uye nyaya dzekuvimba pamusoro. Zvizhinji zveizvi zvinogona kuvandudzwa nekuvandudza rako rekutarisa peji.
mutambo - Edza uye uvandudze yako peji mashandiro pane ese desktop uye nhare. Ive neshuwa kurodha bvunzo yako saiti futi - vanhu vazhinji vanoedza saiti iyo isina yakawanda yevashanyi… uye kana ivo vese vauya, saiti inoparara.
famba - Ita shuwa kuti ruzivo rwako rwefoni runotungamira uye rwuri nyore. Yakajeka, makuru, akasiyana mabhatani ane akareruka mapeji uye maitiro kuyerera akakosha kune nhare yekushandura mwero.
Kufambira Mberi Chiratidzo - ratidza shopper yako kuti mangani matanho ekupedzisa kutenga kuitira kuti vasanetseke.
Anodaidzira Kuti Aite - yakajeka, yakapesana mafoni-kune-chiito anotyaira shopper kuburikidza nekutenga maitiro kwakakosha.
Navigation - kujekesa kufamba kunoita kuti munhu adzokere kune peji rapfuura kana kuti adzokere kushopu pasina kurasikirwa nefambiro mberi.
Product ruzivo - ipa maonero akawanda, zoom, mashandisirwo, uye mushandisi-yakatumirwa chigadzirwa ruzivo uye mifananidzo saka vatengi vane chivimbo kuti vari kuwana zvavanoda.
batsira - ipa nhamba dzenhare, taura, uye kunyange kubatsira kutenga kune vatengi.
Zvemagariro humbowo - sanganisira mumagariro uchapupu zviratidzo senge popups uye kuongororwa kwevatengi uye zvipupuriro izvo vamwe vatengi vanovimba newe.
Payment mikana - wedzera nzira dzese dzekubhadhara kana mari yekudzora kudzikisira kugadzirisa nyaya.
Mabheji ekuchengetedza - ipa mabheji kubva kuongororo yechitatu-bato inoita kuti vatengi vako vazive kuti yako saiti iri kusimbiswa kunze kwekuchengetedza.
Shipping - ipa nzira yekupinda zip kodhi uye uwane inofungidzirwa kutumira nguva uye mutengo.
Sevha kuitira gare gare - ipai nzira yevashanyi yekuchengetedza ngoro yavo kuitira gare gare, kuiwedzera kune wishlist, kana kuwana zviyeuchidzo zveemail zvekubva muzvitoro zvigadzirwa.
Kurumidza - ipa yakanangana nenguva -kwakaburitswa kana zvabuda-chinangwa zvinopa kuwedzera kutendeuka.
kunyoresa - usade chero rumwe ruzivo kupfuura runodikanwa kuti ubudise. Govera kunyoresa kana shopper yaongororwa, asi usavamanikidza mukuita.
Maitiro Ekudzoreredza Akasiiwa Akatengera Ngoro
Kune mamwe anoshamisa otomatiki mapuratifomu kunze uko anotora uye email vakanyoreswa vatengi pane yako saiti. Kutumira chiyeuchidzo chezuva nezuva kuna shopper wako aine ruzivo nezve izvo zviri mungoro yavo inzira huru yekuvadzosa.
Dzimwe nguva, mushoperi ari kungomirira kuti abhadharwe kuitira kuti vapedze kutenga. Vakasiya ngoro yekutengera maemail haasi spam, anowanzo batsira. Uye iwe unogona kufona yakasimba kuti uite muemail yako kuti shopper yako irege kuyeuchidzwa nezve ngoro iyoyo. Tinokurudzira Klaviyo or Cart Guru zverudzi urwu rwekushandisa. Ivo vakatodaro browse kusiiwa uye kunze-kwe-stock zviyeuchidzo mune yavo otomatiki maitiro!
Iyi infographic kubva Monetate ine mamwe matipi akakura ekuvandudza yako Checkout maitiro uye kudzikisa ngoro yekutengera kusiiwa. Ivo vanoshandisa izwi rekuti "nzvenga" iro randinotenda kuti harisi rechokwadi, zvakadaro. Hapana anogona dzivisa ngoro yekutengesa kusiiwa pane yavo ecommerce webhusaiti.
Tags: kusiiwadzivisa kusiiwabrowse kusiiwangoro kusiiwatarisa-kusiiwapeji rekutarisaCheckout peji dhizainiCheckout peji maitiroe-zvokutengeseranaecommercedzosera ngoro yekutenga kusiiwakuderedza ngoro yekutenga kusiiwamungoro yekutengerakusiya ngoro yekutengesangoro yekutengesa kusiyiwa manhamba
Zvikonzero gumi Saiti Yako Saiti Iri Kurasika Organic Chinzvimbo ... Uye Zvekuita
Khoros Kushambadzira: Yemagariro Media Kushambadzira & manejimendi Ebhizinesi
Mbudzi 22, 2011 na12: 50 PM
Kuda iyo Buffer plugin.
Mbudzi 22, 2011 na8: 23 PM
Thanks nokuti info.
Ini ndinobvuma, zvinoshamisa kuti vanhu hava "edza kubika kwavo" kana kuona vamwe vachiedza kutenga.
Imwe pfungwa yakarova kumba yaive yekuviga yekusimudzira kodhi bhokisi. Ini ndinowanzo bheja uye ndoedza kutsvaga kodhi kana kutsvaga imwe saiti ine mutengo wakaderera.
Nov 23, 2011 pa8: 17AM
Ida iyo 15 uye 50 bvunzo!
Nov 23, 2011 pa9: 48AM
Ve, hapana chimwe chakanyanya kufungidzirwa kupfuura ane makore gumi nemashanu uye ane makore makumi mashanu okuberekwa 🙂